Waamicha Lammummaa (National call): Ilmaan Oromoo jiddutti, lola labsuu fi Oromiyaa dirree waraanaa taasisuun … – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWaamicha Lammummaa (National call): Ilmaan Oromoo jiddutti, lola labsuu fi Oromiyaa dirree waraanaa taasisuun …
Aanaa horo says:
Yaaada gaariiidha itti jabeeessa
Rakkoo guddaa umaa Kan jiru, gaafii tokko malee, bulchiinsa naannoo Oromiyaa, miseensoota ODP fi mootummaa ‘fedraala’ kan Dr. Abiyyiin durfamu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hojiin isaa Kan duraa nagaa ummata Oromoo tikiisudha. Haata’u male, bulchiinsii Obboo Lammaa, hojiin inni guyyaa guyyaan itti jiru faallaa kanatii.
Oromiyaan gama hundaan, guyyaa 3651/2, dhigaa jirti. Namootiin hedduun guyaa safaan, biyya Lammaan fi waaherllan isaa bulchaa jiran keessatti qalamaa jiru. Kan samichii irratti gaggfamu,
kan hala sukkaneessan miidhaan qaamaa irra gahuu, kan mana isaa keessaa gadii darbamee kara irra itti jireenya du’aa gadii jraatu rabbii yoo ta’ee malee namiin lakkaaye hin fixu.
Oromoon, yoo xiqqaatee, miliiyoon 2 ta’u qeeyee isaa irraa buqa’ee, raasaa keessatti kufee jiru osoo argaa jiranu, guyyaa tokko gadii bahaani yoo dubiisan ykn waan ummata sanaa yoo dubbatan hin dhgaaman. Diina kallattii Oromiyaa hundaan, Oromoo abbiddaan waddaa jru adabachiisu irra, waraan isaanii diinaa irra goree Oromoo akka ajjeesu bobbaasaa jiru. Ilmaan Oromoo hedduu maqaa itti moggaasuudhan ajjeesaa, hidhaa itti guraa jiru.
Gaafii ummataatiif gurra hin qaban. Dabballoota isaanii waggoota 27f ummata Oromoo qaluufi qalchiisaa turan, gandaa tokkoo irraa tokko itti bobbaasuudhan waanuma TPLF waliin kaleessa itti turan hojjechaa jiru ammas. Kun obboo Lammaa fi waahellan isaanii jalaa waan dhokatee miti.
Mootumman Dr. Abiyyi Oromoon dhiyaa wayita qalamaa jiru itti,naanno biroo keessa deemani midhaan qmadii dawachaa turan. Yaa Oromoo ykn warri dhugaaf dhabaattan kan hubadhaa! Ilmoon namaa hafee, namin sareen jalaa midhamtelleen nigada. Daa’imman, haadhoolern, abbootiin Oromoo balleesaa tokkoo malee daggala keessa itti reefii isaani abiiddaan yoo gubamu, qalmani lafa irra yoo harkiifaman, motummaa Dr.Abiyyii biraa mraarfannoon hafe, afuura tokkoolleen dhaban.
Kanaan dura, naannoo buraayyu itti waltti buiinsii xiqqoon umamnaan magalaa Hawaas irraa, komaandoo amma funyaani itti hidhate ummata Oromoo irra itti,daqiiqaa muraasa keessa itti, akka bobaasan niyaadatama.
Angoo isaani, kan ergee itti fufsiisuuf akka isaan gargaaru, diina kallattii maraan Oromoo dhabamsiissuuf alaakaa jiru waliin harka walkeesa naqatani, ummata keenya irra itti hammeenyi hiriiyyaa hin qabine yoo raawatamu usaniin ilalaa jiru. Waan hedduu kaasuun nidanda’ama.
Duma irratti, mootumman naanno Oromiyaas ta’ee kan Fedeeraalaa, diinoota Oromoo amma wajjiin shubbiisaa jirtan qabanneeti feedhii ummata kana ukkaamsinee biyyatti tana bulchiina jeetanii kan yaaddan yoo ta’e, kana hara yaaddan boruuf akka hin taane hubadhaa. Warri TPLF fi isiin waggaa 27 gutuu kan yaadaa turtan maal akka ta’ee fi amma waan jiru hubadhaa.
Karaa itti cufinee, amman bodaa kan feedhii keenya hojjeena yoo ta’e yaadiin keessaan, kan umaa umee hulaa heduu akka qabuu hin dagatiinaa!